Somushambadzi wechitatu, Google inoshandisa makiki kuitira kushambadzira panzvimbo yedu. Nokushandisa makiki, inopa zvivako zvinoenderana nekushanyira vashandisi vedu, nzvimbo yedu nemamwe masayiti paInternet.
Users Google nhamba yehutano uye yehutano hwehutano hwemagariro Unogona kudzivisa kushandiswa kweDART cookie nekushanyira. Google inoshandisa makambani ekuparidzira evanhu vatatu kuti vape zvivako zvemashambadziro paanoshanyira webhusaiti yedu. Makambani aya anogona kushandisa ruzivo (kunze kwezita rako, kero, kero ye email kana nhamba yefoni) kubva kushanyira kune idzi masayiti uye mamwe mawebsite kuti akuratidze kushambadzira kwezvigadzirwa nemasevisi anokufarira. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pekushandiswa uku uye kuchengetedza ruzivo rwakadaro kushandiswa nekambani idzi, tsvaga zvaunosarudza uye NAI Kuzvitongesa wega nheyo dzevaparidzi (PDF).
Izwi rokuti "cookie maktad rinoshandiswa kurondedzera zvinyorwa zvinyorwa zvese iyo webhusaiti yewebhu yepawebhu inowedzera pakombiyuta yakaoma yekombiki. Dzimwe zvikamu zvesaiti yedu inogona kushandisa makiki kuitira kuti vashandisi vashandise. Cookies uye web beacon zvinogona kushandiswawo kutora mashoko ekutsvaga kuburikidza nezviziviso zviripo panzvimbo ino. Izvi zvinoitwa nemvumo yako, uye iwe unogona kudzivisa izvi nekushandura zvirongwa zvewe internet browser.